अशोक दर्जीको पहिलो गीत नै भाइरल ! « Ramailo छ
अशोक दर्जीको पहिलो गीत नै भाइरल !
झापाका भाइरल बाल गायक अशोक दर्जीले गाएको पहिलो गीत नै भाइरल भएको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको दर्जीले गाएको ‘मन बिनाको धन ठुलो’ बोलको गीत यतिबेला नेपाल युट्युव ट्रेन्डिङको शिर्ष पहिलो स्थानमा छ भने गीतको भिडियोलाई एक दिनमा ९ लाख ६० हजार बढीले हेरेका छन् ।
दर्जीको भिडियामा ८३ हजार लाइक र बाह्र हजार बढी कमेन्ट्स आएका छन् । डिस्लाइक दुई हजार मात्रै छ । कमेन्ट्समा धेरैले दर्जीको स्वर राम्रो भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरुले यस्तै दर्जीलाई गीत गाउन अवसर दिएका संगीतकार टंक बुढाथोकीलाई पनि धन्यवाद दिएका छन् । गीत हेर्नुस् :
सडकमा गीत गाउँदै हिड्ने अशोक दर्जी युट्युवमा ईन्टरभ्यु आएसँगै भाइरल भएका हुन् । ईन्टरभ्यु भाइरल भएपछि संगीतकार बुढाथोकीले अशोकलाई गीत गाउने अवसर दिएका थिए । झापामा सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका दर्जी परिवारलाई घर बनाउन यतिबेला टंकको टिम सहयोग जुटाउन लागिपरेको छ । अशोक अहिले आफ्नै गृह जिल्लामा विद्यालय पनि भर्ना भएका छन् । अशोकसँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नस् :